Questerium: Anotadza Utatu, yemahara kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Questerium: Anotadza Utatu, yemahara kwenguva pfupi
Zvekare isu tinokuzivisa iwe nezve mutambo wekunakidza kubva kune anovandudza G5, imwe yeanoshanda zvakanyanya kana tikataura nezve graphic adventures yeIOS. Questerium: Anotadza Utatu anotaurira nyaya yemeteor inowira mutaundi diki. Shamwari nhatu dzehucheche, meya, mudzidzisi uye mubhengi, Ivo vanoongorora dombo remuchadenga uye vanoita akateedzana ezviedzo. Nekugadzira muchina une njodzi kuwedzera simba remeteorite, muchina unoparadzwa uye simba remeteorite rinoparadza guta rese. Zvirimwa nemhuka zvinoshanduka zvinotyisa apo meya achiedza kuburitsa guta rese kusara kwevana vaviri, vana vaviri vakarasika uye kuti isu tichafanirwa kuwana zvakadaro.
Panzira yedu kuitira kuti tiwane vana vaviri vakarasika, isu tichawana makumi mana nemapfumbamwe nzvimbo dzinotaridzika dzekutarisa zvinongedzo, 39 zviitiko zvakasiyana apo isu tichafanirwa kutsvaga zvinhu zvekufambira mberi mumutambo, makumi maviri neshanu minigames akaomeswa, makumi maviri nematatu zvibudiriro zvatinofanirwa kuwana kuti tipedze mutambo zvinogutsa, zvibodzwa zviri kuwedzera yakaoma maererano nerudzi rwekuoma kwatinosarudza kubva pane mana atinawo. Kufanana nemazhinji emitambo yazvino iri kuvandudzwa mumwedzi ichangopfuura, Questerium inowiriranawo neMitambo Center, iyo inotibvumidza kuyananisa kufambira mberi kwedu kungave kuburikidza ne iPhone yedu kana kuburikidza nePadad yedu, mukuwedzera pakukwanisa kukwikwidzana neshamwari dzedu.
Kunge mitambo yakawanda kubva kunogadzira G5, Questerium inoda yakaderera 1,18 GB Pane yedu kifaa, iyo yakarongwa kweane makore 9+ uye inoda zvirinani iOS 6 kana gare gare kuti ugone kunakidzwa nemutambo. Iyo vhezheni yeQuesterium: Sinister Utatu yePadad ine mutengo wenguva dzose we6,99 euros, nepo iyo vhezheni ye iPhone iine mutengo wenguva dzose we4,99 euros.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Questerium: Anotadza Utatu, yemahara kwenguva pfupi
Doko yekuchaja maAirPods? Eheka!
Foxconn inofambira mberi zvirongwa zvayo zvekutanga kugadzira OLED skrini zvePhones